Amboradara, Voninkazo sy Vorona, Hosodoko Sinoa, Hazy Jiangnan Hanitra︱NoneZone Design - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Peta-kofehy, voninkazo sy vorona, sary hosodoko sinoa, Hazy Jiangnan Flavor︱NoneZone Design
Peta-kofehy, voninkazo sy vorona, sary hosodoko sinoa, Hazy Jiangnan Flavor︱NoneZone Design
2021 / 06 / 20 FisokajianaInterior design 4870 0
Ny trano fisakafoanana Ding Sheng Tang amin'ity tranga ity dia miorina amin'ny trano Repoblikana ao He Alley, Nan Chang Street, Wuxi, izay trano fitehirizana tantara, noho izany dia tokony hisy ny tarehy, colonnade, lalamby ary singa toy ny voninkazo amam-baravarankely sy sokitra biriky voatahiry. Ho fanampin'izany, ny trano fisakafoanana dia miorina amin'ny tanàna antitra toa an'i Qingming Bridge, izay manana loko ara-tantara sy ara-kolontsaina matanjaka manodidina. Noho izany, ny mpamorona dia nanaraka ny loko maizin'ny habakabaka tany am-boalohany, naka "hazy" ho fanahy, nanaparitaka ny firafitra nentim-paharazana Jiangnan tamin'ny endrika endrika maoderina, ary nampiasa fomba artista isan-karazany toy ny virtoaly sy tena izy, hazavana sy aloka, hetsika ary mijanona amin'ny famoronana toerana poetika kanto miaraka amin'ny "hazy Jiangnan midika". Kanto sy tononkalo ny toerana.
Maitso toy ny manga ny ony amin'ny lohataona, tsy mahatadidy an'i Jiangnan ve isika?
Ny trano fisakafoanana dia napetraka ho mariky ny nahandro faran'izay tsara sy nandroso tamin'ny endrika Suzhou, miaraka amin'ny efitrano malalaky ny efitrano manokana. Noho izany, novolavolain'ilay mpamorona ny habaka anatiny amin'ilay trano ary nampiasa veneer hazo mainty izy mba hifanaraka amin'ny loko tany am-boalohany. Namolavola ny efitrano kely voalohany izy tany am-boalohany ho faritra mahazatra feno fofona manitra an'i Jiangnan, nametraka ny feo sy ny toetran'ny habaka iray manontolo ary nahatonga azy io ho fety voalohany hitan'ny mpanjifa.
Hazy dia mety hahatonga ny tsy fahalavorariana tonga lafatra sy voafetra tsy misy fetra.
Ao amin'ny faritra an-tsambokely lobby eo aloha, Su Yang dia mampiasa ny singa amin'ny lambam-by. Ny zavon'ilay ridao dia mampihena ny habaka ara-batana, manapaka ny fahatsapana ny fetra, ary manitatra ny toerana an-tsaina sy sary an-tsaina. Ny mpanjifa dia afaka mahita sy mankafy ny amboradara amin'ny rindrina, ny kesika taloha amin'ny rindrina sy ny haingon-trano hafa amin'ny alàlan'ny elanelana amin'ny harato, ka miaina ilay tononkalo manaitra sy gadona.
Mandritra izany fotoana izany dia nametraka singa fitaratra tao amin'ny habakabaka ilay mpamorona. Amin'ny alàlan'ny fandinihana sy ny fiasan'ny vera, dia manitatra ny halaviran-toerana ary mampitombo ny fahatsapana ny zava-misy sy ny fiheverana diso, hahatratra sehatra iray izay avy amin'ny ary mihoatra ny zavatra, mamorona traikefa mahafinaritra sy mahafinaritra.
Ao amin'ny famolavolana ny lalambe mankeny amin'ny efitrefitra voalohany mankany amin'ny boaty, dia takatry ny mpamorona mazava tsara ny gadon'ilay habaka ary atsipazo ireo firavaka sarotra sy be loatra. Nampiasa teknika famolavolana tsotra sy madio izy hanamorana ny habakabaka amin'ny habakabaka, hampanan-karena ny haavon'ny habakabaka ary hananganana tetezana mampihetsi-po hitarika ny mpanjifa any amin'ny faritra lalina any Jiangnan hiaina ny fahatsapana tsara amin'ny “tanàna ao anaty haizina”.
Nilaza ny rehetra fa tsara i Jiangnan, saingy manaiky fotsiny ireo mpitsidika fa efa antitra i Jiangnan.
Ny lambam-by dia ny marika famolavolana miavaka indrindra amin'ny habaka boaty, manasongadina ny feony eo amin'ny habakabaka, izay tsy vitan'ny fanatsarana ny firaisan'ny tsipika fahitana ao anaty boaty, fa manatsara ny fahatsapana ny fombafomba sy ny toetran'ny Jiangnan ao anaty boaty. Ny stencil manjavozavo dia miteraka fahatsapana fahabangana ary manitatra ny tena sary tsy misy fetra mba hanehoana feno ny hatsaran'ilay Jiangnan setroka.
Misy efitrano manokana telo ao amin'ny rihana voalohany, mifototra amin'ny firafitry ny trano voalohany, ka ny mpamorona dia nampiasa famaranana hazo maizina mba hampitony ny atmosfera sy hanamafisana ny firavaka taloha. Ny zavon'ilay harato vy sy ny fikorianan'ny hazavana sy aloka dia manalefaka ny fahatsapana fetra ary manafina ny antsipirian'ny habakabaka nefa hita ihany, marefo sy mazava.
Ny peta-kofehy, ny voninkazo ary ny vorona, ny sary hosodoko sinoa ary ny singa hafa dia miafina an-tsokosoko eny amin'ny habakabaka, na manjavozavo na mandambolambo, manala ny toetran'ny Jiangnan ary mampanan-karena ny traikefa hita maso.
Rehefa mijery azy ianao, dia toa akaiky eo akaiky ny fanahin'ny Jiangnan, ary misy setroka sy orana toa manodidina. Eo ambanin'ny fidiran'ny hazy, ny eritreritra sy ny ahiahy manelingelina rehetra dia azo aparitaka ary hiverina amin'ny fandriam-pahalemana.
Ho an'ny boaty amin'ny rihana faharoa, notohizan'ny mpamorona ny toe-tsaina Jiangnan mifototra amin'ny teknika maoderina, amin'ny alàlan'ny famolavolana rindrina sy valindrihana mba hanomezana fihenjanana eo amin'ny habakabaka.
Ny lamba rindrin'ny felam-boninkazo dia mamorona ny fahatsapana mahafinaritra amin'ny "plum amin'ny fiandohan'ny pavily kely, manaitra ny fiverenan'i Jiangnan". Ao amin'ny antsipiriany, ny mpamorona dia manao ny hatsaran'ny efitrano tsy miankina amin'ny rihana faharoa amin'ny fahasamihafana kely amin'ny alàlan'ny fanovana ny hantsana sy jiro.
Ny seta dite, latabatra ary seza sinoa dia nampiana tao amin'ny efitrano tsy miankina mba hamoronana rivo-piainana milamina sy kanto feno fanintona fahizay an'i Jiangnan, nitondra ny tompony fahatsapana fiononana sy fahamendrehana "manarona mandrakariva, ny setroky ny setroka ary milamina ny orana ”.
Hiran'ny toe-po manjavozavo Jiangnan, ary ny tononkalo sy divay mbola tanora.
Ny votoatin'ny habakabaka dia fiainana. Amin'ny alàlan'i Ding Sheng Tang, ny zavatra ambarantsika amin'ny olona dia tsy ny fahaizan'ny famolavolana ihany, fa koa ny fanantenana fa afaka miverina amin'ny tena toetrany ny olona ary mahatsapa ny fahagagana sy ny hatsaran'ny fiainana eo am-pankasitrahana sy miaina ny hatsaran-tarehy manjavozavo Jiangnan, hahafahan'izy ireo tadiavo ireo taona tsara ary mamorona fahafaha-manao tsy manam-petra.
Chart Tabilao fanadihadiana
Anaran'ny tetikasa: Trano fisakafoanana Ding Sheng Tang
Toerana misy ny tetikasa: Wuxi, Jiangsu
Orinasa mandrafitra: Biraon'ny Design Design anyZone
Mpamolavola mpitarika: Su Yang
Famolavolana fanaka malefaka: Cheng Zheng
Fotoana famolavolana: 2020.07
Fotoana famaranana: 2021.01
Fitaovana lehibe: veneer hazo, amboradara amin'ny rindrina, ambain-by
Saripika: Xu Yisheng
Mpiara-manorina sy talen'ny famolavolana ny DesignZeaZone
Nahazo diplaoma tamin'ny Sekolin'ny Arkitekniversiten'i Hunan, ny AnotherZone Design dia maneho ny haren'ny habakabaka amin'ny fiteny famolavolana tsotra, manasongadina ny fampitana traikefa nahafinaritra sy ny fikolokoloana ny maha-olona amin'ny habaka ankehitriny, manome lanja ny fitambaran'ny maritrano sy ny tontolo iainana, manaja ny fifandraisana misy eo amin'ny olona sy ny toerana. , ary ny sangan'asany dia manome famaritana vaovao isaky ny tetikasa manokana miaraka amina sary vaovao.
Nozone Design dia natsangana tamin'ny taona 2016, ary ny mpiara-miombon'antoka dia taorinan'ny taona faha-85, avy amin'ny sehatry ny maritrano, ny endrika anatiny ary ny kanto ary manana birao ao Shanghai / Wuxi ankehitriny. Ny ekipa dia natokana amin'ny fikarohana spatial momba ny traikefa amin'ny maha-olombelona, ​​ary na dia feno ny endrika sy vokatra mora vidy, haingana ary novokarina betsaka aza ny fizotran'ny asa fampandrosoana any Sina, dia manantena ny hanokana ny tenany amin'ny fikarohana momba ny fanavaozana sy ny traikefa ny noneZone Design. ny foto-kevitry ny famolavolana maha-olona miaraka amin'ny fomba fijery vaovao, ary ny famoronana endrika spatial hafa.
Previous :: Famerana sy hafanam-po, mamorona gorodona fisaka lehibe miisa roa | Xia Chenglong Design Next: Ny fizotran'ny tetikasa feno famolavolana malefaka, tantanan'ny olona vitsivitsy!
2021 / 08 / 15 3219
2021 / 08 / 15 4095
2021 / 08 / 15 3613